babimild, Author at Babi Mild Moms Club
ဒေါကျတာ Mild နှငျ့ အမေးအဖွေ (အပိုငျး – ၁၆၂)
1. အိမျထောငျရှိသညျ ကလေးကမှေးပွီး၁၅ရကျရှိပါပွီ။ ခကျြမကွှသေေးဘူးဆရာရှငျ့။ စိုးရိမျရပါသလားရှငျ့။ ဒီထကျထူးခွားမှု မရှိရငျ စိတျမပူရပါဘူး… ခကျြကွိုးအကွောငျးကိုအောကျက Link မှာရှိတဲ့ ဆောငျးပါးလေးမှာဖတျကွညျ့ပေးပါ… http://babimildmomsclub.com.mm/?p=5971 ကနျြးမာပြျောရှငျပါစေ Dr.Mild ——————————- 2. HlaingHlaing ကြှနျမသမီးအကွောငျးမေးခငျြလို့ပါ။ ကလေးက၈လထဲမှာပါ။ ကလေးမကျြစိကသူငယျအိမျစောငျးနတေယျလို့သူနာပွုဆရာမကပွောလို့ဘာလုပျရမှနျးမသိဖွဈနပေါတယျ။ သူငယျအိမျစောငျးတာမှေးရာပါလား၊ တခွားအကွောငျးကွောငျ့ဖွဈရတာလဲဆိုတာသိခငျြပါတယျဆရာ။ ကလေးကလညျးဟိုကွညျ့ဒီကွညျ့ဖွဈတော့ဝခှေဲမရဖွစိနပေါတယျ။ ကုသမှုလုပျမယျဆိုဘယျလိုဆရာဝနျနဲ့ပွရမှာပါလဲ။ ကြေးဇူးပွု၍ပွနျလညျဖွကွေားပေးပါဆရာ။ မကျြစိအထူးကုဆရာဝနျနဲ့ ပွသစဈဆေးဖို့ လိုအပျပါတယျ… အရေးကွီးအင်ျဂါ အစိတျအပိုငျး ဖွဈတာကွောငျ့ စနဈတကြ ပွသပါလို့ အကွံပွု တိုကျတှနျးလိုပါတယျ… ကနျြးမာပြျောရှငျပါစေ Dr.Mild ——————————- 3. Thae Tone May May ဆရာရှငျအိမျနားကကလေး၃နှဈရှိပါပွီ။ စကားခုထိမပွောသေးလို့ စိုးရိမျရလားဖွပေေးပါ။ ဒီအရှယျထိစကားသခြောမပွောသေးရငျ […]
ဘဘေီလေးတို့အရေး ဆှေးနှေးရအောငျ (၂၉)
မေး။ ။ ကလေးနို့မဝတဲ့အခါ နို့ဘူးတိုကျလို့ ရပါသလား။ ဖွေ။ ။ မိခငျနို့ကိုခဏခဏပေးစို့လြှငျ နို့ထှကျမြားလာပွီးကလေးနို့ဝလာမှာပါ။ ကလေးကို နို့မတိုကျခငျ မိခငျကအရညျမြားမြားသောကျပါ။ နို့၊ ကျောဖီတို့ သောကျလို့ရပါတယျ။ မိခငျနို့သာကလေးအတှကျ အကောငျးဆုံးမို့ မိခငျနို့သာတိုကျပါ။ ကလေးနို့စို့ပွီးရငျ ကနျြနတေဲ့နို့ကိုညှဈထုတျပေးလိုကျမှသာ နို့အပွညျ့ပွနျဖွဈပါမယျ။ ညှဈမထုတျလိုကျပါက နို့တဈဝကျ (သို့မဟုတျ) နရောရှိသလောကျ နို့ပွနျဖွဈပွီး နို့ထှကျနညျးသှားတတျပါတယျ။ နို့ဘူးမတိုကျသငျ့ပါ။ နို့ကိုညှဈပွီးဇှနျးနှငျ့ တိုကျနိုငျပါတယျ။ မေး။ ။ နို့တိုကျနသေောမိခငျ အစားရှောငျဖို့ လိုပါသလား။ ဖွေ။ ။ အစားရှောငျဖို့ မလိုပါ။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ၊ အသား၊ ငါးအစိုအခွောကျ အကုနျစားပါ။ သို့မှသာအာဟာရပွညျ့ဝသောကလေးငယျမြား ဖွဈလာမှာပါ။ မေး။ ။ နို့တိုကျမိခငျ အစားရှောငျပါကဘာဖွဈတတျသလဲ။ ဖွေ။ ။ နို့တိုကျမိခငျ အစားရှောငျရငျ […]
ဒေါကျတာ Mild နှငျ့ အမေးအဖွေ (အပိုငျး – ၁၆၁)
1. Angel Queen ဆရာရှငျ့သားကွီးက၉လကြျောပါပွီ။ နလေ့ညျခငျးတှအေစာပွဘောမုနျ့တှကြှေေးလို့ရသေးလဲ။ ရှငျ့ကွကျသားဘီစကဈနဲ့အနှဈမပါတဲ့ပါမု့နျ့တှကြှေေးလို့မရတော့လို့ပါရှငျ့။ ဒီအရှယျမှာ ဘာကြှေးရမယျ၊ ဘာမကြှေးရဘူးလို့ အထူးတလညျ သတျမှတျထားခွငျး မရှိပါဘူး… အာဟာရ မြှတအောငျ ကြှေးပေးဖို့တော့ လိုအပျပါတယျ… နောကျပွီး ကလေးကို သူကွိုကျတတျတဲ့၊ ကွိုကျနိုငျမယျ့ အစားအစာနဲ့ အာဟာရ ပွညျ့စုံ မြှတစမေယျ့ အစားအစာ မြှတပွီး ခြော့ကြှေးပေးဖို့လညျး လိုပါတယျ… အစာစားခငျြစိတျ ပိုဖွဈစဖေို့ Lysine ပါဝငျတဲ့ အားဆေး တိုကျကြှေးပေးနိုငျပါတယျ… ကနျြးမာပြျောရှငျပါစေ Dr.Mild ——————————- 2. Yadi Lay သားသားက၄လခှဲရှိပါပွီ။ လကျလေးတနေဲ့ဗိုကျနားလေးတမှောဘုလေးတပေေါကျနလေို့ပါ။ ယားဘုလိုမြိုးလေးတနေားအနောကျလေးတဆေိုလကျကလေးနဲ့ကုတျတာရဲနတောပဲ။ ဘယျလိုလုပျပေးရမလဲရှငျ့။ အမွနျပြောကျအောငျ။ ကလေး ယားယံနတေဲ့ ပုံစံမြိုး ရှိရငျ Calamine Lotion လေး လိမျးပေးနိုငျပါတယျ… […]
အဖျားကြီးပြီးတက်သောကလေးကိုဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုရင် ဒီကလေးတက်ရသည်မှာအဖျားကြီးလို့ဖြစ်တာကြောင့် အဖျားကျအောင် လုပ်ရပါမယ်။ တက်နေသောကလေးကိုဘေးစောင်းထားပါ။ အန်ဖတ်မစို့အောင်လို့ပါ။ ပူခြစ်နေသောခေါင်းကိုအေးနေသောရေဝတ်နှင့် ခေါင်းမှစပြီးသုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့် ခေါင်းကိုအေးအောင် လုပ်ရပါမယ်။ တက်နေပြီဆိုရင် ခေါင်းကိုအေးအောင် လုပ်ရုံတင်မကဘူး၊ နီးရာဆရာဝန်ဆီသွားရပါမယ်။ အတက်ကျအောင် စအိုမှဆေးသွင်းပြီးလုပ်ရပါမယ်။ အဖျားကြီးပြီးတက်တတ်တဲ့ကလေးကိုဖျားရင် ဘယ်လိုဝတ်စားပေးရမယ်၊ ဘယ်လိုပတ်ဝန်းကျင်မှာထားရမလဲပြောပြီးပါပြီ။ အဖျား ၁ဝ၁-၁ဝ၂ ဖြစ်လာလို့ရှိရင် မတက်အောင် ရိုးရိုးရေနှင့် ခေါင်းလောင်းချိုးသင့်ပါတယ်။ ရေခဲရေနှင့်တော့ ရေဖတ်မသုတ်ရဘူး။ ရေခဲရေကြောင့် အရေပြားရှိသွေးကြောလေးတွေ ကျဉ်းသွားပြီးပိုအဖျားတက်လာကာပိုဆိုးတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးရိုးရေနှင့်ပဲရေချိုးရေဖတ်သုတ်ပါ။ ကျွန်မတို့လူမျိုးတွေကကလေးငယ်တွေကိုရေဖတ်သုတ်ခိုင်းရင် မလုပ်ရဲကြဘူး။ အထူးသဖြင့် ခေါင်းကိုရေဖတ်သုတ်ခိုင်းရင် နဖူးလောက်ပဲတင်ကြတယ်။ ခေါင်းကိုမသုတ်ရဲကြဘူး။ ငယ်ထိပ်မပိတ်သေးတဲ့ကလေးဆိုငယ်ထိပ်ပေါ် အေးနေတဲ့ ရေဝတ်တင်ပေးတာအပူပိုထွက်ပြီးကိုယ်ပူအေးမြန်ပါတယ်။ ကိုယ်ပူကြီးတဲ့ကလေးကိုရေလောင်းချိုးခိုင်းရင် ခြေဖျားကစလောင်းကြတဲ့အတွက် ခေါင်းပိုင်းပိုပူလာပြီးရေချိုးနေလျက်နဲ့ တက်သွားတတ်တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ပူလို့ ရေလောင်းရင် ခေါင်းမှ စလောင်းရမှာ […]
1. မဝေဝေလွင် ဆရာရှင့်သားလေးက၆လပါ။ အိပ်တဲ့အခါနာရီနည်းနည်းပဲအိပ်ပါတယ်။မိနစ်၂၀လောက်အိပ်ပြီး၃နာရီလောက်မှပြန်အိပ်ပါတယ်။အိပ်တဲ့အားဆေးကျွေးစရာလိုမလား။ဘာဆေးတိုက်ရမလဲသိချင်လို့ပါ။ပြန်ဖြေပေးပါနော်။ အိပ်တဲ့ အားဆေးရယ်လို့ မရှိပါဘူး… ဗီတာမင် စုံလင်တဲ့ အားဆေးတစ်မျိုးမျိုး တိုက်ကျွေးလို့ရပါတယ်… ၃လမှ၆လအထိကလေးအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးလေးကို အောက်က ပေးထားတဲ့ Link မှာဖတ်ရှုပေးပါ… https://www.facebook.com/BabiMildMyanmar/photos/a.954392134587165.1073741827.948971191795926/1557381844288188/?type=3 ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild ——————————- 2. Yu Ki 10 လက​လေးကမိတ်​ကြီးနာ​တွေ​ပေါက်​​နေတာဖျားလဲမဖျားပါဘူး။ အစား​လေး​တော့စားတာနည်းသွားပါတယ်​။ ဘယ်​လိုလုပ်​ရမလဲရှင့်​။ ယားယံနေတာအတွက် Calamine Lotion လေး လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်… အရေပြားပြဿနာ ဖြစ်လို့ စနစ်တကျ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် မသက်သာရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသစစ်ဆေးကြည့်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild ——————————- 3. ချိုတေး သီ ဆရာရှင်သားသားက ၆ လပြည့်ပါပြီ။ […]
မေး။ ။ (၆)လထက်ငယ်ပါက ထမင်းကျွေး၍ မရဘူးလား။ ဖြေ။ ။ တချို့မိခင်တွေက ရက်သားကစပြီး ကလေးဝမ်းအေးအောင် ထမင်းဝါးခွံကြပါတယ်။ ဒီအပြုအမူ မှားပါတယ်။ ထမင်းကို အစာခြေနိုင်တဲ့ အမိုင်လေ့(စ်)အင်ဇိုင်း (amylase enzyme) ကလေးမှာမရှိသေးခင် အတင်းကျွေးပါက မျိုချတာပဲရှိပါမယ်။ ဝမ်းသွားတဲ့အထဲ ပါသွားလို့ အကျိုးမရှိပါ။ မိခင်ပါးစပ်၊ ဝါးခွံသူပါးစပ်က မသန့်သောပိုးမွှားရောဂါများသာ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ (၆)လကျော်ရင် အစာခြေနိုင်သော enzyme ထွက်ပြီမို့ ကျွေးလို့ရပါပြီ။ မေး။ ။ ထမင်း ဘယ်တော့ကျွေးရမလဲ။ ဖြေ။ ။ ဆန်ပြုတ်ကျွေးရာမှ သွားလေးများပေါက်လာပြီး (၈)လကျော်ပါက ထမင်းပျော့ပျော့နှင့် ငါးပေါင်း၊ ငါးကြော်၊ ဟင်းချိုရည်လေးနဲ့ ကျွေးလို့ရပါပြီ။ မေး။ ။ သွားပေါက်နောက်ကျလို့ ကလေးကို ထမင်းမကျွေးနိုင်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ […]
1. Thidar Khine ဆရာရှင့်သားလေးကတစ်လနဲ့တစ်ဆယ့်ခုနှစ်ရက်သားလေးပါ။ နေ့တိုင်းနှာချေပါတယ်။ ပြီးတော့ ခြေဖျားလက်ဖျားလေးတွေလည်းအမြဲမဟုတ်ပေမယ့် အေးအေးနေတတ်ပါတယ်စိုးရိမ်ရပါလားရှင်။ နှာချေခြင်းကို တွေ့ရခြင်းဟာ ကလေးရဲ့ တုံ့ပြန်မှု စနစ်ကောင်းမွန်ကြောင်းပြသတဲ့ ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်… ကလေးတွေရဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းလေးဟာ သေးငယ်လှတဲ့အတွက် လူကြီးတွေထက်ပိုပြီး လမ်းကြောင်းထဲဝင်လာတဲ့ ဖုန်မှုန့်၊ နို့၊ အကျိအချွဲတွေကို ပိုခံစားသိရှိတဲ့အတွက် လူကြီးတွေထက် ပိုနှာချေတတ်ပါတယ်… ဒါဟာ စိတ်ပူစရာမဟုတ်ဘဲ ကောင်းမွန်တဲ့ လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်… နှာချေခြင်းအပြင်၊ နှာစေးခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း စတာတွေ ရှိရင်တော့ ကလေးကို ဆရာဝန်နဲ့ ပြသစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild ——————————- 2. ချို မာဝင်း ဆရာရှင့် ကျွန်မသမီးလေးက မွေးစက ဆံပင်အရမ်းထူပြီး ဆံပင်ကောင်းပါတယ်။ အခု […]
ဖြည့်စွက်စာကျွေးတဲ့အချိန် အသက်(၆)လမှာသွားငုတ်တုတ် လူငုတ်တုတ်ဖြစ်၍ သွားလေးတစ်ချောင်း၊ နှစ်ချောင်းပေါက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျော့ပျော့နှင့် အစာကြေလွယ်သောအစာကိုကျွေးရပါမယ်။ ထမင်းရည်ပျစ်ပျစ် စကျွေးပါ။ မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် ကျွေးလို့ရပါတယ်။ ဆား၊ သကြားနည်းနည်းနှင့် နို့မှုန့်ရောပြီးကျွေးလို့ရပါတယ်။ နို့လိုမျိုးရှောရှောရှူရှူ မျိုလို့မလွယ်တာကြောင့် ကလေးတွေ ထွေးထုတ်တတ်ပါတယ်။ ကြိုးစားပြီးချော့မော့ကျွေးပါ။ အချိန်ပေးပြီးစိတ်ရှည်စွာကျွေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာထမင်းရည်ပျစ်ပျစ် သောက်ရမယ်ဆိုတာသိသွားဖို့ပါ။ လျှာဖျားလေးပေါ် တင်ပြီးကျွေးရင် ထွေးထုတ်ရလွယ်တာကြောင့် လျှာအလယ်နားရောက်အောင် ကျွေးသင့်ပါတယ်။ ထမင်းရည်ပျစ်ပျစ်ကနေဆန်ပြုတ်ကျဲကျဲနှင့် ပဲနီကလေး၊ ပဲဝါကလေးရောပြုတ်၊ သို့မဟုတ် ငါးဆန်ပြုတ်၊ အသားဆန်ပြုတ် တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးအရသာပြောင်းပြီးကျွေးရပါမယ်။ နေ့စဉ်တစ်မျိုးတည်းကျွေးပါကကလေးမစားချင်တော့ပါ။ ဆီကျက်လုပ်ထားပြီးစားခါနီးမှာဇွန်းသေးတစ်ဇွန်းစာထည့်ပါကကယ်လိုရီပိုရပါသည်။ တချို့လူတွေက Ready Made အစားအစာတွေ ကျွေးကြပါတယ်။ ရတော့ရပေမယ့် ပိုက်ဆံအပိုကုန်ကျပါသည်။ တစ်ခါတလေအဆင်မပြေရင် ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ ချွဲထခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးစားအောင် အချိုလွန်ကဲထားလို့ပါ။ ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေကထမင်းအဓိကစားတာမို့ ဆန်နှင့်လုပ်ထားသော ဖြည့်စွက်စာကျွေးတာကောင်းပါတယ်။ ဆန် […]
1. Rose Love ဆရာရှင့်သမီးလေးက၃နှစ်နဲ့၁လပါ။ နှုတ်ခမ်းမှာအနာဖြစ်နေပါတယ်။ ဆရာစစအရေကြည်ဖုလေးကနေပွားပြီးပုံထဲကလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ရေယုန်ပေါက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလား။ ဘာဆေးများသုံးရမလဲညွှန်ကြားပေးပါဦးရှင့်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါဦးရှင့်။ စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှု မပါဘဲအဝေးကနေဆေးဝါးညွှန်းဆိုကုသလို့ မရတဲ့အတွက် အရေပြားအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ဖြစ်စေကလေးအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ဖြစ်စေ ပြသဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်… လိမ်းဆေး၊ သောက်ဆေးစတာတွေ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild ——————————- 2. KhetWaiNaing ကလေးကခေါင်းချွေးတေတအားထွက်ပါတယ်။ ပြီးတော့အီးအီးကလည်းတဗျစ်ဗျစ်နဲ့အမြဲလိုလိုထွက်ပါတယ်။ ၄လခွဲပါစိုးရိမ်ရပါလား။ ချွေးထွက်များတဲ့ အခါမျိုးမှာအရည်ဓါတ် ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးရပါမယ်… မိခင်နို့ပိုတိုက်ပေးပါ… ချွေးထွက်တာကအရမ်းများလွန်းနေတဲ့အပြင် ဝမ်းပျက်တာလည်းရှိနေတော့ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်… ကလေးငယ်နှင့်ခေါင်းချွေးထွက်ခြင်းဆောင်းပါးကိုအောက်ကပေးထားတဲ့ Link မှာဖတ်ရှုပေးပါ… http://babimildmomsclub.com.mm/?p=5655 ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild ——————————- 3. MeeNgae . သားလေးက၇လပြည့်ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့်အခုထိလေးဘက်လဲမသွားထိုင်လဲမထိုင်သေးဘူးဆရာ။ အဲ့ဒါဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေတာလားရှင်။ […]
၁။ နှာခေါင်းကို သန့်စင်သော အဝတ်စ (သို့မဟုတ်) စက္ကူပျော့ပျော့(တစ်သျှူး)နှင့် နှာခေါင်းအတွင်းထည့်၍ သန့်စင်ပေးပါ။ ၂။ နွေးထွေးစွာထားပါ။ ဦးခေါင်း၊ လည်ပင်း နွေးအောင် ထားပါ။ ၃။ နှာစေးပျောက်ဆေး ဘာမီတွန်တိုက်၍ ရပါသည်။ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီး တိုက်ပါ။ ၄။ စီဗစ် (Cevit) ကဲ့သို့သော ဆေးလည်း တိုက်နိုင်သည်။ ၅။ မတည့်သောအနံ့နှင့် အစားများကို ရှောင်ရှားပါ။ ၆။ မိခင်နို့မစို့နိုင်ပါက နို့ကိုညှစ်ပြီး ဇွန်းနှင့် တိုက်ပါ။ ၇။ အရည်များများ၊ စွပ်ပြုတ်ရည်များတိုက်ပါ။ နှာစေးပါက ခံတွင်းပျက်တတ်သော်လည်း ကြိုးစားပြီး ကျေလွယ်သောအစာကို ကျွေးပါ။ ၈။ လူထူထပ်သောနေရာများကို မခေါ်သွားပါနှင့်။ ၉။ ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲတွင် နှာစေးချောင်းဆိုး ဖြစ်တတ်သောကြောင့် ရာသီဥတုအလိုက် အဝတ်အစား ရွေးဝတ်ရပါမည်။ နွေအခါ […]